မောငျ(စှယျစုံကမျြး): ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာဖောင့် ပြဿနာတက်သူများအတွက် ဒီနည်းကိုသာသုံးပါ ၉၉% အဆင်ပြေတယ်
ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာဖောင့် ပြဿနာတက်သူများအတွက် ဒီနည်းကိုသာသုံးပါ ၉၉% အဆင်ပြေတယ်
မြန်မာဖောင့် ပြဿနာတက်သူတိုင်း ဒီဖောင့်လေးကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်
လူအတော်များများ ဖြစ်တာတွေ့ တယ် ရေးလို့ ရပြီး Enter နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
လေးထောင့်ကွက်တွေ ဖြစ်ဖြစ်နေတာ..။ တချို့ ကတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်
၀က်ဆိုဒ်ဖွင့်ရင် ၀က်ဆိုဒ်နာမည် အမှန်မပေါ်တာ ပါဠိစာလို့ ပေါ်နေတာတွေနဲ့ 
ရေးရင် လေးထောင့်ကွက် ၊ နှိပ်လိုက်မှစာပေါ်တယ်ဆိုတော့ ဒီဖောင့်လေးကို
သုံးကြည့်စေချင်တယ်။ ကဲ....အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ ဆွဲသုံးကြည့်စေဖို့ ........။
ဒီမှာ Download ယူပါ -www.zippyshare.com/Zawgyi Blog Day Font
မသုံးခင် ဖတ်ကြည့်ပါ - http://www.alpha.com.mm/blogday/index.html
Author Anonymous at 9:47:00 PM
Labels: Zawgyi Font ပြဿနာဖြေရှင်းရန်, ကွန်ပျူတာအတွက်မြန်မာဖောင့်များ
i'm computer can't write but can read myanmar please ko mg
thnak you my ကို
ဆရာမောင်နဲ့ ငယ်ရင်းများခင်ဗျာ လက်တော့ ASUS အမျိုးစားကို ပြန်မာဖောင့်ထည့်တာ install လုပ်ပြီ keyboard မှာရေးမရပါသဖြင့် မည့်သည့်ဖောင့်နှင့် မည်သို့ လုပ်မှ ရမလဲ သိတော့ ညီအကိုများ ပြောပေးကြပါခင်ဗျာ။ TO...kominmalay@gmail.com Thanks
do not appear myanmar fonts in my computer although it was downloaded and installed. pls help me to get read it my myanmar fonts in my laptop window 8 OS.
ဆရာမောင်နှင့်သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ microsoftကထုတ် တဲ့surface မှာမြန်မာဖောင့်ရောကီးဘုတ်ပါထဲ့လို့မရဘူး
အကိုရေကူညီပါအုန်း..ဘာလော့တွေမှာကြည်ရင်မြန်မာစာကပြောင်ပြန်ပေါ်နေတယ်..နောက်ပြီးတော့ google talk မှာလဲ zawgyin one ပြောထားပါတယ် စာရေလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်...အကိုပြောသလိုလဲလုပ်ပြီးပါပြီးမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်..နောက်ပြီး enternet..ex မှာလဲ formt အကိုနှိက်လိုက်ရင်လဲ zawgyin one ဆိုတာကိုမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်..နောက်ပြီးတော့လဲ ctrl>shift တွဲနှိက်တော့လဲစာလုံးကပြောင်မသွာဘူး အင်္ဂလိပ်လိုဘဲပေါ်နေပါတယ်အကို ကျေးဇူပြုပြီးကူညီပါအုန် အကို w-7
ကိုမောင်ရေ window 8 မှာမြန်မာစာ မရတာ တော်တော်ကြာပြီ ဗျ
ခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ ကျေးဇူးပါဗျာ....
Phone ထဲကနေ သီချင်းတွေ ဇာတ်ကားတွေ ဒေါင်းလုပ်ယူလို့ ရမယ့်ဆော့ဝဲ
ဒီဆော့ဝဲလေးက အတော်လေးစုံအောင် ဒေါင်းလုပ်ယူလို့ ရတယ် သီချင်းတွေရော ဟာသ အတိုအထွာ ဇာတ်ကားတွေပါ ရှာလို့ ရတယ် လိုင်းကောင်းသူ ၀ိုင်ဖိုင်ရသ...
Aiseesoft DVD Creator 5.1.78 With Crack Full Version Size(28MB)
ဗီဒီယိုဖိုင်များကို DVD အဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ AVI, MPEG, DivX, DV, VOB, WMV, MP4, etc များနှင့် လူကြိုက်များသော F...